Milina fanoratana tamin'ny laser vita amin'ny metaly, Laser Cut2 an'ny Laser vita amin'ny vy - Shenya
Haavo R & D
Mihoatra lavitra ny haavon'ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny teknolojia
Namboarina; mihaino, matihanina; endrika mahira-tsaina; famokarana manan-tsaina
Izahay dia mitady mpandraharaha sy mpiara-miasa amin'ny varotra manerantany
Varotra mivantana amin'ny orinasa, vokatra avo lenta, faharanitan-tsaina avo, azo antoka ary mateza.
SHENYA CNC dia nanolo-tena tamin'ny fikarohana, fampandrosoana ary famokarana vokatra marani-tsaina CNC toy ny fanamarihana, sary sokitra ary fitaovana fanapahana. Amin'ny alàlan'ny ezaka tsy manam-paharoa ataontsika, Shenya CNC dia nanjary orinasa mpamokatra sehatra iraisam-pirenena marobe ankehitriny. Ireo vokatra manana fahitsiana avo lenta, faharanitan-tsaina avo, fiarovana ary faharetana miaraka amin'ny rafitra fiantohana asa maimaim-poana mandritra ny fotoana maharitra ary fitandremana fitandremana sy lafatra aorinan'ny varotra, dia nahatratra ny laharana voalohany ho an'i Shenya CNC ao amin'ny indostria
Fanapahana vy varahina
Fanapahana takelaka vy
Fanapahana taratasy akrilika
Hazo vita sokitra tamin'ny laser
Inona avy ireo fitaovana mety amin'ny milina fanapahana laser vita amin'ny metaly? Fa ny fahombiazana avo lenta sy ny fametrahana mazava tsara dia lavitra ny an'ny olombelona ...
Inona avy ireo anton-javatra misy fiatraikany amin'ny sokitra laser?
Inona avy ireo anton-javatra misy fiatraikany amin'ny sokitra laser? Ny laser dia afaka manao karazana milina maro. Toy ny fitsaboana ny hafanana ambonin'ny fitaovana, ny welding, ny fanapahana, ny totohondry, ny sokitra ary ny micromachining. Masinina tamin'ny sokitra laser tamin'ny laser ...
Nahazo baiko voalohany ny mpanjifa amerikana
Nahazo baiko voalohany ny mpanjifa amerikana Tamin'ny 26 aprily, nahazo ny fangatahana fangatahana mivantana avy amin'ny mpanjifa amerikana Atoa Fip izahay. Takian'ny mpanjifa: azonao atao ve ny manome ahy teny nalaina ho an'ny milina iray, fanaterana ho any am-baravarana, Kalifornia / Etazonia. Atoa ple ...
Fomba fanapahana isan-karazany amin'ny milina fanapahana laser Ny fanapahana laser dia fomba fanodinna tsy mifandray amin'ny angovo avo sy mifehy tsara ny hakitroka. Ny faritra laser misy hakitroky angovo avo lenta dia miforona aorian'ny fampifantohana ny laser bea ...